उपचारपछि निकाे भएका पुरुषको विर्यमा भेटियाे काेरोना भाइरस! - Deshko News Deshko News उपचारपछि निकाे भएका पुरुषको विर्यमा भेटियाे काेरोना भाइरस! - Deshko News
उपचारपछि निकाे भएका पुरुषको विर्यमा भेटियाे काेरोना भाइरस!
बेइजिंग, बैशाख २७
छुनुले र स्वास प्रश्वासको माध्यमबाट फैलिनसक्ने कोरोना भाइरस अन्य कुन कुन माध्यमबाट सर्न सक्छ भन्ने विषयमा अझै अध्ययन जारी छ । यस अध्ययनका क्रममा यौन सम्पर्कबाट पनि सर्न सक्ने संकेत स्वरुप विशेषज्ञहरुले केही प्रमाण प्राप्त गरेका छन् ।